Tiffen နိုင်ငံတကာကိုပထမဦးဆုံး Steadicam က M-1 တူးစင်၏ပေးပို့ကျင်းပ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
FSR ၏ Smart-Way Raceway မြေအောက်သွားသည်
Tedial သည် Ebantic ကို Evolution MAM Platform ၏အဆင့်မြင့် developer အဖြစ်သတ်မှတ်သည်
Cast & Crew မှရရှိသောယူကေလုပ်ခလစာခေါင်းဆောင် Sargent-Disc
PMM နှင့်အတူလူသားများဖန်တီးသည့်တေးသီချင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
EFILM ၏ Skip Kimball သည်သိမ်မွေ့သော“ Ford v Ferrari” ကြည့်ရှုခြင်းကိုသိမ်မွေ့သောလွမ်းဆွတ်မှုတွင်တွေ့ရသည်
“ Café Society” အရောင်အသွေးစုံသည့် Anthony Raffaele သည်နယူးယောက်၊
Q India သည် MX Player ကိုစတင်ခဲ့သည်
ဂျပန်တီဗီတီဗီသည်သတင်းများ Streaming Workflow ကို ATEM Switchers ဖြင့်တည်ဆောက်သည်
Periscope Post & Audio ဖြည့်စွက်အကြီးတန်းအရောင်အသွေးစုံ Kevin Kevin Kirwan
RUSHWORKS သည် PTX Model 1L ကို Video Show တွင်မိတ်ဆက်သည်
Toluca ရေကန်ရှိ Waterman Sound စတင်သည်
Doordarshan နှင့်အတူ GatesAir ၏သီးသန့်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုသဘောတူညီချက်သည်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းသို့တိုးချဲ့
ဘာရိန်းပြည်နယ်ရုပ်သံလွှင့်ဌာနမှ Pebble Beach Systems မှသေတ္တာတစ်ခုတွင် Stingray Channel နှင့်အတူသမိုင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်
လူ့အတွေ့အကြုံအေဂျင်စီ MOD သည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဆုသုံးဆုရရှိသည်
ထုတ်လုပ်သူ / အရောအနှော Alvin Wee အတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလုပ်ငန်းအသွားအလာထိန်းချုပ်မှုကို NUGEN မှပေးသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Tiffen နိုင်ငံတကာကိုပထမဦးဆုံး Steadicam က M-1 တူးစင်၏ပေးပို့အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့
Tiffen နိုင်ငံတကာကိုပထမဦးဆုံး Steadicam က M-1 တူးစင်၏ပေးပို့အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့
1: ဗြိတိန်အတွက် Steadicam တီထွင်သူ Garrett ဘရောင်းဂျာမနီရှိမက်စ် Zaher မှပေးပို့များအတွက်အသစ်များကို 7th မျိုးဆက်က M-1 Steadicam ပြင်ဆင်နေ
2: မက် Zaher, သူ့သစ်ကိုက M-1 Steadicam မျှော်လင့်
လန်ဒန်, ဗြိတိန်, 28th မေလ 2015: ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် Tiffen အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာမန် Steadicam အော်ပရေတာမက်စ် Zaher နေဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သောပထမဦးဆုံးSteadicam®က M-1 တူးစင်၏ပေးပို့ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်သည်။
Steadicam တီထွင်သူနှင့် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် လက်ခံရရှိသူ Garrett ဘရောင်း, ASC, 'ထွန်းလင်း' နှင့်ကြိုတင်ဖြန့်ဝေဖို့ပထမဦးဆုံးက M-35 စစ်ဆေးခြင်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ၏ 1th နှစ်ပတ်လည်နေ့ဆင်နွှဲရန်ဗြိတိန်၌တည်ရှိ၏။ Garrett တစ်ပါတ်အတွက် Long Beach, California ပြည်နယ်အတွင်းရှိအထင်ကရ '' ဘုရင်မမာရိသညျ '' ဘုတ်ပေါ်မှာတာရှည် Steadicam သင်တန်းဆုံးမဩဝါဒပေးအပြီးဗြိတိန်၌တည်ရှိ၏။
မက်စ် Zaher လက်ရှိတည်နေရာအပေါ်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနှင့်ကံမကောင်းကိုယျတိုငျတူးစင်ကိုလက်ခံရရှိရန်ဗြိတိန်မှရနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။ မက်စ်တစ်ဦး Steadicam အော်ပရေတာ / ကင်မရာမင်းအဖြစ်ဂျာမန်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်ဦးမြင့်တက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်ငါ၏အဆရာများ၏ Steadicam တူးစင်, Klemens Becker ကများနှင့်လည်းအငှားတူးစင်နှင့်အတူနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်င့်ပေမယ့်ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်တူးစင်ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောစွတ်ဖားစီးခြင်း, လက်နက်နှင့်အင်္ကျီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တော်မူပြီးမှ, ငါရှာဖွေနေခဲ့ရာသိတယ်။ အလင်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်အမြန် mode ကို configure သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူ။ ဒါဟာ modular ဖြစ်သင့်ဒါကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်လျှင်ငါလမ်းမပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ငါက tool ကိုအခမဲ့ဖြစ်နှင့် add-ons တွေကိုများအတွက် connector မြားအမြားအပွားအမျိုးအစားများရှိချင်တယ်။ CINEC မှာကျွန်မအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောတူးစင်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ M-1 ချက်ချင်းအလွန်ကောင်းသောခံစားခဲ့ရနှင့်ဝေးသဖြင့်ကျွန်မလိုအပျသောအရာကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ "
"ဒီက M-1 သင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ် Steadicam တူးစင်များတွင်ရှာအရာအားလုံးရှိပါဘူး။ ဒါဟာကောင်းစွာဟန်ချက်ညီရန်နှင့် configure အလွန်လျင်မြန်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာဒီနေ့ရုပ်ရှင်ချမှတ်ခြင်းအတွက်အများကြီးကူညီပေးသည်သောအသေးစိတ်မှတဆင့်ထင်နေသည်။ ဒါဟာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပျော်စရာဖြစ်ပြီးငါပြီးသားကကိုချစ်! "
Garrett ဘရောင်း commented: "ငါက M-1 ကမှလှူဒါန်းခဲ့ကြသူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏အပြင်းအထန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါသုံးဆယ်တစ်ခုခုနှစ်ပေါင်း Steadicam ကိုယ့်ကိုယ်ကို operated ဘဲလျက်ဆိုသည်ကားရန်ရှိသည် - ငါ 2004 အတွက်ရပ်တန့် - ။ ငါသညျဤသစ်ကိုတူးစင်မှာအနည်းငယ် wistfully ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါကသုံးပြီးထွက်ရှိနိုင်ဆန္ဒရှိ "
M-1 အတွေ့အကြုံ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှု, နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့ Steadicam ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားထုတ်လုပ်မှု tool ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီသူအသုံးပြုသူများထံမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောတုံ့ပြန်ချက်နှင့် input ကိုခုနစျယောစဉ်မြေးဆက်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအပေါင်းတို့၏အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးကြံ့ခိုင် Steadicam ပါပဲ။ အဆိုပါ '' M က '' modular အတိုကောက်, ဤအစဉ်အဆက်အများဆုံး modular Steadicam ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအရိုးရှင်းဆုံးပို့စ် start နှင့်အပြည့်အဝရေနံတူးစင်မှနောက်ပိုင်းတွင် upgrade နိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်မပါ tools များ - အသစ်က M-1 ကင်မရာဇာတ်စင်တစ်ခု optional ကို vernier လက်ချောင်းထိပ် tilt ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူသာလွန်ကျောမှုများအတွက်စင်တာ drives တွေကိုနှင့်အတူခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောဝန်တိပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်ထားသည်။
G-70x elasticity လက်မောင်းချိန်ညှိအလွန်အမင်းအကြမ်းခံ, စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပြီး, ကြီးမားတဲ့ 70lb နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ပေးထားပါတယ်။ စွမ်းရည်နှင့် 29 "စန်းအကွာအဝေးရုတ်သိမ်းရေး။ သငျသညျအနည်းငယ်သာကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးအနေအထားကရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ရှေးခယျြမှု၏အင်္ကျီယခုအများအပြားအဘို့အ Steadicam အော်ပရေတာက Chris Fawcett ကဒီဇိုင်း, အ Fawcett Exovest ™ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး pivoting exoskeletal ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ Exovest လည်းဖော်ရွေအမျိုးသမီးဖြစ်သည့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေဒီဇိုင်းနှင့်အတူ On-The-ပျံသန်း Adjustments, အတားအဆီးမဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအော်ပရေတာများအတွက်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခုန်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ Steadicam အော်ပရေတာလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးပစ်ခတ်မှုနေချိန်မှာပိုပြီးသဘာဝရွှေ့။
M-1 ရဲ့အနိမ့်ဒေါင်လိုက်ပရိုဖိုင်းကိုလိုအပ်ရှိရာမော်နီတာနှင့် gimbal နေရာချဖို့အော်ပရေတာအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးခြင်း, စွတ်ဖါးအရှည်၏အကြီးမြတ်ဆုံး extension ကိုအသီးအသီး post ကိုအရှည်ကောင်းလာတာပါနှင့်ရှည်လျားသည် Modes အတွက်အပိုမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်မှန်ဘီလူးအမြင့်နိုင်ပါတယ်။ Tiffen ထုံးစံမော်နီတာကွင်းခတ်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့်အတူပြည့်စုံအစွန်းရောက်အထိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက် Monitor ကိုအမျိုးအစားများ, ထုတ်လုပ်သူများ, အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုပေးပါသည်။
ဂျာမဏီများအတွက် Steadicam ဖြန့်ဖြူးပြန် 1977 အတွက်ဂျာမနီကမိတ်ဆက်နှင့်ဥရောပအတွင်းပထမဆုံး Steadicam ငါရောင်းသောမြူးနစ်အတွက် Betz-Tools များဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကိုင်အရေးယူရိုက်ချက်များထွက်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မယ့် device ကိုအောင်: အစောပိုင်း 1970s ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Garrett ဘရောင်းရိုးရှင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်တော်လှန်ရေးသမားစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်ဖြစ်ပါသည် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်"ဘုနျးတျောကိုအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်" ရုပ်ရှင်အပေါ်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းနှင့်ရုပ်ရှင် "Rocky" နှင့်ထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ထရာSteadicam®, -winning "ဒီတိုက်။ "
ထိုအချိန်မှစ. Steadicam စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော, ပြောင်းလဲနေသောထုတ်လုပ်မှု tool ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Steadicam ကင်မရာတည်ငြိမ်စနစ်များ၏နယူးသားစဉ်မြေးဆက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံအဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတိုက်ဖျက်မည်မှဒီဇိုင်းပါပြီ။ Tiffen သင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဦးဆောင်အစွန်းမော်ဒယ်တစ်ဦးပြည့်စုံလိုင်းပေးထားပါတယ်။ Tiffen သင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ် State-Of-The-Art steadicam နည်းပညာနှင့်အတူအဆိုကိုရုပ်ပုံ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကူညီပံ့ပိုးရန်ကျူးလွန်နေသည်။
Tiffen အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်း: Tiffen နိုင်ငံတကာအမေရိကပြင်ပအားလုံး Tiffen ထုတ်ကုန်များ၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျနှင့်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ရုံးတွေရှိတယ်။
Tiffen အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်, Pinewood Studios က, Iver Heath, ဗြိတိန်
Tiffen စားသုံးသူ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်နှင့် 70 နှစ်အတွင်းအဘို့အဆိုကိုရုပ်ပုံနှင့်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲ filter များ, မှန်ဘီလူးဆက်စပ်ပစ္စည်း, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Tiffen နှစ်ခုနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သောဆုများနှင့် Motion Picture Arts & သိပ္ပံအဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကနေတစ်ခုEmmy®ဆုချီးမြှင့်ရဲ့အကယ်ဒမီကနေသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆုကိုဝင်ငွေ၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်း, ပါဝင်သည်ထားတဲ့: စနစ်များ, Lowel®အလင်း, Listec ™ teleprompters, Tiffen Dfx®ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဆော့ဖ်ဝဲ, Domke®အိတ်, Davis က & Sanford® tripod တည်ငြိမ်Tiffen® filter များ, Steadicam®ကင်မရာ, ဇင် ®ကင်မရာအဖုံးများ, Stroboframe® flash ကိုကွင်းခတ်, Saunders®ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညှပ်နှင့် Kodak Wratten® filter များ။
Tiffen အဆိုပါ Tiffen Company ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များပိုင်။
ထောက်ပံ့နှစ်ဦးကို 300 dpi ဓါတ်ပုံ:
1: Tiffen အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗြိတိန်မှာ Garrett ဘရောင်း, ဂျာမနီအတွက်မက်စ် Zaher မှပေးပို့များအတွက်ပထမဦးဆုံးအသစ်ကထုတ်လုပ်မှုက M-1 Steadicam ပြင်ဆင်နေ
Mel လမ်းပြ Noonan
stylus မီဒီယာ Consultants
အီးမေးလ်က: [အီးမေးလျ protected]
Stylus Media ကနောက်ဆုံးရပို့စ်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Transvideo: Cine ဂီယာ 2019 မှာနောက်ဆုံးရနှင့်ဦးဆောင်မော်နီတာထုတ်ကုန် - မေလ 13, 2019
Cine ဂီယာ 2019 မှာ Aaton-ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ဆုရအသံဖမ်းကြည့်ရှုပါ - မေလ 13, 2019
4G-Cross: ဒဿမဒီဇိုင်းတစ်ခု 12K လက်ဝါးကပ်တိုင် Converter ကိုကြေညာ - ဧပြီလ 8, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2015-05-28
ယခင်: ထုတ်လွှင့် Pix အိတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်, InfoComm 2015 မှာနယူး '' Show ကိုလွှဲပြောင်း '' ဆော့ဝဲ Utility ကိုပြသ
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ PANAVISION PANASCOUT App ကိုသင်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း Expand
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ - အချိန်ပြည့်
အနုပညာဒါရိုက်တာ / ဒီဇိုင်နာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာ - အလွတ်တန်း
ဒီဂျစ်တယ် / Multi- မီဒီယာဒီဇိုင်နာ
အလယ်အလတ်ရှုခင်းဒီဇိုင်နာ / ဗိသုကာ
အလယ်အလတ်ဗိသုကာ / ဒီဇိုင်နာ
အလယ်အလတ်ဗိသုကာ / ဒီဇိုင်နာ - လူနေအိမ်
အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူငါ - သတင်း
Spring Internship, Digital Photo & Video Editing- နယူးယောက်
ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအသံအင်ဂျင်နီယာ (Walt Disney Television)
မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်သူ
အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပြဆရာ (DINFOS)
Satellite TV Legislation ၏အိမ်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်အပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
Satell TV ပြဌာန်းချက်ဥပဒေအိမ်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ NAB ထုတ်ပြန်ချက်
နှစ် ဦး NAB ရုပ်မြင်သံကြားဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှခန့်အပ်ခဲ့သည်
STELAR ဥပဒေပြုမှု၏အိမ်တရားစီရင်ရေး Markup အပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
NAB သည် 'Broadcast Essentials' ပညာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
အိမ်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ STELAR ဥပဒေပြဌာန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ NAB ထုတ်ပြန်ချက်